yepakati frequency induction kupisa masisitimu ekuumba, kupisa kupisa, nezvimwe
musha / Induction Power Supply / MFS yepakati frequency kudziyisa masystem
Categories: Induction Power Supply, Nguva Yakawanda Yenguva Yakawanda Tags: medium frequency, svikiro frequency annealing, svikiro frequency yekuchengetedza, pakati frequency heater, medium frequency heating, Pakati pezvinokonzera kupisa foni, medium frequency heating machine, Pakati pezuva rinopisa simba remhepo, Pakati pezvinokonzera kupisa system, Pakati nepakati kupisa kunopisa, miviri yakadzika inopera, svikiro frequency preheating
yepakati frequency induction kudziya masystem uye kudziyisa magetsi magetsi
Medium frequency induction kupisa masisitimu (MFS akateedzana) anowedzeredzwa neakawandisa renji 500Hz, 10KHz uye simba100 ～ 1500KW, dzinonyanya kushandiswa pakupisa mukati, senge tsvimbo yekupisa yekuumba, kusungunuka, kukodzera uye preheat yekutungidza. Nekuda kwehupamhi hwayo huwandu hwenzvimbo, inogutsa yekudziya mhedzisiro inowanikwa zviri nyore nekugadzirwa kwekufunga zvinhu zvese senge inopinda chishuwo, kupisa kupisa, ruzha rwekushanda, simba rinokanganisa remagineti zvichingodaro.
Mune MFS yepakati frequency michina, yakafanana oscillating chimiro chinoshandiswa. IGBT module emagetsi emagetsi uye yedu yechina chizvarwa inverting control tekinoroji inoiswa kuverengera mhando yepamusoro uye kuvimbika. Kudzivirirwa kwakazara kunogamuchirwa sekudzivirira kwazvino, kudzivirirwa kwemvura, pamusoro pekudzivirirwa kwetembiricha, pamusoro pekudzivirirwa kwemagetsi, kuchengetedzwa kwedunhu pfupi uye chikamu kutadza kuchengetedzwa. Paunenge uchishanda, kubuda kwazvino, kubuda kwemagetsi, oscillating frequency uye simba rekubuda zvese zvinoratidzwa pane yekushandisa paneli kubatsira mukugadzirwa kweiyo coil uye kugadzirisa yemuchina.
Zvinoenderana nekushandiswa kwakasiyana, zvivakwa zviviri zvikuru zvinoshandiswa:
(1) chimiro 1: MF jenareta + capacitor + coil
Ichi chimiro chinogamuchirwa kazhinji mukushandisa kwakawanda, senge tsvimbo induction kupisa muchina uye muchina unonyungudika. Ichi chimiro chiri nyore, chakaderera chakarasika uye chakanyanya kushanda mukupisa.
Mune ino chimiro, kazhinji 3 kusvika 15 metres chubhu chubhu inodiwa kugadzira coil; voltage yeiyo coil yakakwira kusvika ku550V, uye haina kusarudzika kune magetsi, saka coil inofanirwa kuvharirwa mushe kuti ive nechokwadi chekuchengetedza kwevashandisi.
（2） chimiro 2: MF jenareta + chivharo + chinoshandura + coil
Ichi chimiro chinoshandiswa zvakare kazhinji, sekunyunguduka muvharumu, yepakati frequency induction hardening machine zvichingoenda zvakadaro. Kubudikidza nekugadzirwa kweshanduko, chinobuda chazvino nemagetsi zvinogona kudzorwa kugutsa chishuwo chakasiyana chekupisa.
Mune ino chimiro, coil yakachengeteka kune vanoshanda, coil chubhu inogona kufumurwa yakanangana nekunze kuputira. Coil iri nyore kugadzira nekungochinjika kushoma. Ehezve, shanduko inowedzera mutengo uye mashandisiro emuchina.
Models Yakakatarwa simba rekubuda Kakawanda kutsamwa Input ikozvino chiyamuro voltage Duty cycle Kuyerera kwemvura uremu divi
Voltage mhinduro dhizaini uye inotora IGBT yakavakirwa LC akateedzana resonance wedunhu.
IGBT inversion tekinoroji, yakanyanya simba shanduko pamusoro pe97.5%.
Simba kuchengetedza 30% kumusoro kana ichienzaniswa neSCR tekinoroji. Mune akateedzana resonance wedunhu, induction coil ine yakakwira voltage uye yakaderera ikozvino, saka kurasikirwa kwesimba kwakaderera kwazvo. Nyoro switch switch tekinoroji inoshandiswa uye switch switch yakanyanya kuderera.
Inogona kutangwa kumusoro zana muzana pasi pechero mamiriro.
Pasina harmonic yazvino uye yakakwira simba chinhu. Simba chinhu chinogara chakasara 0.95 pamusoro panguva yekumhanyisa muchina.
Iyo frequency yekutevera otomatiki tekinoroji inogonesa simba chinhu kuti igare yakakwira nhanho mukati mekupisa maitiro
Kuvimbika kwakanaka, IGBT inozvishandura-kudzima transistor iyo inovimbisa kupindirana nekubudirira uye inotora dziviriro ipapo; IGBT yakashandiswa kubva kune infineon kambani, inozivikanwa pasi rese mugadziri.
Nyore kushandisa uye kuchengetedza, IGBT MF induction jenareta iri nyore kudzivirira uye kugadzirisa nekuda kwayo yakapusa wedunhu mamiriro. Ine dziviriro yakakwana.
Rudzi rwekupisa moto, yakagadzirirwa mhando dzakasiyana dze induction kupisa chira zvinoenderana nemutengi inoda.
CNC kana PLC inodzorwa mechina fixture yekuomesa kunyorera
Mvura inotonhora system.
Pneumatic tsvimbo feeder.
Yakasarudzika yakazara otomatiki kupisa system.
Hot Nokuchengetedza / Anoumba guru workpiece.
Kumusoro kuomesa chikamu chikuru.
Kuchenesa kwepombi kukotama.
Kuwedzeredzwa kwepombi yekutenderera.
Kunyauka kwealuminium mhangura zvichingodaro.
Shrink-fit ye ​​sleeve ye roller.